မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 08/01/2012 - 09/01/2012
Hong Kong trip Day3- Visit to Ocean Park and Victoria Harbour
၂၀ ရက် ၁လ ၂၀၁၂
Welcome to Ocean Park Hong Kong
ကျွန်မတို့ရဲ့ လမ်းဘေး ဒင်းဆန်းဆိုင်ရှာဖွေရေး mission ကို ဒီနေ့မှာ အထူးအကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဟောင်ကောင်မှာ လမ်းဘေးဒင်းဆန်းဆိုင်လေးတွေက အရမ်းဈေးသက်သာတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ဆန္ဒက အဲလိုဆိုင်မျိုးကို မစားလိုက်ရမရှိရလေအောင် လိုက်ရှာစားချင်တာပါပဲ... ဒါကသူ့ရဲ့ မလုပ်မဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းထဲပါပုံထောက်တာရော၊ ကိုယ်လဲ ဒင်းဆန်းကို ဈေးပေါပေါနဲ့တ၀ကြီးစားချင်တာရော၊ လမ်းဘေးဒင်းဆန်းဆိုင်တွေ ရှာရလွယ်မယ်ထင်တာရောကြောင့် ကျွန်မတို့ ၂ယောက်ရဲ့ ရှာဘုံတော်ခရီးစဉ်ကိုစခဲ့ပါတယ်...
အဲဒိနေ့က ဟော်တယ်ကို Morning Call မနက် ၆နာရီခေါ်ခိုင်းထားပေမဲ့ ၂ယောက်လုံးပြန်အိပ်လိုက်ကြတာ ၇နာရီခွဲမှနိုးပါတယ်... သိတဲ့အတိုင်း ပြင်ဆင်ကြာမြင့်ချိန် ၁နာရီခွဲဆိုတော့ ၉နာရီမှဟော်တယ်ကထွက်ဖြစ်ပါတယ်... ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက ကျွန်မအမြင် ဟောင်ကောင်က စကာင်္ပူထက် Night life ပိုရှည်ပါတယ်... ညဘက်တော်တော်နောက်ကျတဲ့အထိ လူစည်ပါတယ် (ကိုယ်နေတဲ့နေရာက Orchard လို လူစည်တဲ့နေရာဖြစ်နေလို့လားတော့ မသိပါ).. ဒါပေမဲ့ မနက် ၇နာရီ ၈နာရီလောက်ဆိုရင်လဲ လမ်းသွယ်တွေထဲ လူအတော်ရှင်းပါသေးတယ်... (ဘယ်အချိန်အလုပ်သွားကြလဲတော့မသိပါ...)
ကျွန်မတို့ နေတဲ့ ဟိုတယ်က Tim Sha Tsui (တင်မ်ရှဆွေ) ဘူတာနဲ့ ဂျော်ဒန်ဘူတာကြားမှာပါ... တင်မ်ရှဆွေနဲ့တော့ ပိုနီးမယ်ထင်ပါတယ်... ဂျော်ဒန်ဘက်မှာ လမ်းဘေးဆိုင်တွေများမယ်ထင်တာနဲ့ အဲဒိဘက်ကို ဦးတည်ကြပါတယ်... လမ်းမတန်းပေါ်ရောက်တော့ လူတွေများပါတယ်... လမ်းတစ်လျှောက်လဲ ကျွန်မတို့စားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုင်မတွေ့တာနဲ့ မနေ့ကရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာကြောင့် ရှေ့မှာအကောင်းတွေရှိအုံးမယ်ဆိုပြီး ဆက်လျှောက်လာပါတယ်... လမ်းမတန်းအတိုင်းလျှောက်လာတာ လမ်းမပေါ်မှာတော့ ကျွန်မတို့စားချင်တဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်ပုံစံမျိုးမတွေ့ပါဘူး... ဒါနဲ့ လမ်းသွယ်တွေထဲကို ၀င်ရှာပါတော့တယ်... ဟိုလမ်းဝင် ဒီလမ်းထွက်လုပ်သလို ကိုယ်သွားလာတဲ့ လားရားလမ်းတွေကိုလဲ မျက်စိမလည်အောင် သတိနဲ့ မှတ်နေရပါတယ်... ဒါလဲ မတွေ့ပါဘူး... နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေမဟုတ်ပဲ... နေမြင့်လေ ဗိုက်ဆာလာလေပါပဲ... အတွေးထဲမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ တွေ့မယ်ထင်တဲ့ လမ်းဘေးဒင်းဆန်းဆိုင်က ၄၅မိနစ်လောက်ရှာပြီးတဲ့အထိ အရိပ်အယောင်တောင်မမြင်တော့ ကျွန်မအနေနဲ့ လက်လျှော့ချင်လာတယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ မသေချာတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်နဲ့ အချိန်တွေကုန် အားအင်တွေခမ်းဖြစ်တာကို မလိုလားလို့... အချိန်နဲ့ ခွန်အားကို ပိုက်ဆံနဲ့ပဲလဲလိုက်ချင်တယ်... ဈေးကြီးရင်ကြီးပါစေ တွေ့တဲ့ဆိုင်ပဲ ၀င်စားလိုက်ချင်တယ်...
Jordan ရဲ့ ညဈေး လှည်းလေးတွေနဲ့ ရောင်းတဲ့နေရာကိုလဲ ရောက်တယ်... ဒါပေမဲ့ မနက်ဆိုတော့ အားလုံးပိတ်ထားလေရဲ့... ၄၅ မိနစ်လောက်ရှာပြီးမှ အငွေ့တစ်ဝေေ၀နဲ့ လမ်းထောင့်က အိမ်ဆိုင်လိုလေးရောင်းနေတာကိုတွေ့တယ်... အဲဒိနားကို ဖြတ်လျှောက်ပြီးပြီလိုစိတ်ထဲထင်နေတယ်... ဘာလို့မတွေ့ခဲ့လဲ မသိဘူး... မဖွင့်သေးတာများလား... ဒါပေမဲ့ခုတော့ ကန္တာရထဲမှာ အိုအေစစ်တွေ့တဲ့သူလို ကျွန်မတို့၂ယောက် ဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါ့မလားနဲ့ သွားကြည့်တော့ ဟုတ်နေတယ်... ဒါပေမဲ့ ဆိုင်က ထိုင်စားလို့မရဘူး... ဖော့ဘူးနဲ့ထည့်ပေးတာ... ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး အချိန်မဖြုန်းချင်တာနဲ့ စားချင်တာတွေလက်ညှိုးထိုးပြီးမှာလိုက်ရော... အမဲသားလုံး၊ ၀က်သာလုံး စုံလို့ပဲ... ပြီးတော့ ၂ယောက်သား အဲဆိုင်ထောင့်လေးမှာကပ်ပြီး မတ်တပ်လေးစားနေတော့ ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးက ခုံလေးထုတ်လာပေးတယ်... ၁လုံးတည်းမို့ မုန့်ကိုအဲပေါ်တင်ပြီး ကျွန်မတို့ရပ်စားကြတယ်... အရသာကကောင်းလွန်းလို့ ကျန်တာတွေတောင် မေ့သွားတယ်... ၂ယောက်သား ပျော်ရွှင်ပြီးစားကြတယ်... လောကကြီးက အချိန်တွေကို ခဏမေ့ထားပြီး မုန့်ကိုပဲခံစားလိုက်တယ်... အဲဒီလို မျိုးစုံထည့်စားတာတောင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂၀ ပဲကျတယ်... စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၃ကျပ်ကျော်ပဲ...
ဗိုက်ကလဲတင်း မုန့်တွေကလဲ မကုန်... ဒါတောင် ပေါက်စီဝယ်လိုက်သေးတယ်... မကုန်တဲ့ အသားလုံးတွေကို ဖော့ဘူးနဲ့ပဲ ယူသွားမယ်ဆိုပြီး သယ်လာပြီးမှ လမ်းမှာ ဆီတွေပေါက်ကျလို့ ၂ယောက်သား လမ်းမလယ်မှာ ရပ်စားနေတော့ လူတွေဝိုင်းကြည့်တာခံလိုက်ရတယ်...
ဒီလိုနဲ့ ဗိုက်လဲဝပြီး ဆိုတော့ Ocean Park ကို ဦးတည်လိုက်တယ်... Disney Land တော့ မသွားဖို့ ၂ယောက်လုံးသဘောတူလိုက်တယ်... သူဘာလို့မသွားချင်လဲတော့ မသိ.. ကျွန်မကတော့ ဂျပန်တုန်းကလဲ ရောက်ဖူးလို့ Ocean Park ကိုရွေးလိုက်တာ... Ocean Park သွားပုံလမ်းညွှန်ကတော့...
Admiralty ဘူတာကိုစီး... ထွက်ပေါက် B ကထွက်...
Special City Bus no. 629 ကို ၂၅ မိနစ်လောက်စီးရင် Ocean Park တည့်တည့်ရောက်တယ်....
ဘတ်စ်ကားခ တစ်ယောက်ကို $10.6 ကျတယ်... (တတိယမြောက်နေ့မှာ ဘတ်စ်ကားကဒ်ကို HK$50 ထပ်ဖြည့်ရတယ်... ၀ယ်တုန်းက အထဲမှာ Value HK$100, card deposit HK$50 ရှိတယ်)...
Ocean Park သွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်
ရုပ်ရှင်ထဲက ဟောင်ကောင်အက်ရှင်ကားတွေမှာ မင်းသားတွေပြေးတဲ့လမ်းမျိုး... :)
ဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေ ဟောင်ကောင်မြို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုရလို့ ဘတ်စ်ကားစီးရတာလဲ အလကားတော့မဖြစ်ပါဘူး... Ocean Park ၀င်ကြေးက တစ်ယောက်ကို HK$250 (Ard SGD 42)
အထဲရောက်တော့ အရင်ဆုံးလူတွေအများကြီးဝင်နေတဲ့ Aquarium ကို လိုက်ဝင်လိုက်ပါတယ်... ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားမှာ မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ Aquarium တွေလိုပါပဲ... ဒီမှာက ကစားကွင်းကို လာလည်တဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်တွေများတဲ့အတွက် အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိစွာ ပြုမူတာတွေကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာပဲကွာပါတယ်...
မနက်က လမ်းအတော်လေးလျှောက်လိုက်ရတာရော၊ လူတွေများတာရော၊ ရှေ့ရက်က ပင်ပန်းထားတာရောကြောင့် လူက နှုံးချင်ချင်ဖြစ်နေတယ်... သို့သော် အနည်းငယ်တော့ စီးဖြစ်ပါတယ်... နောက်ဆုံး ခြောက်ကပါးနားက Roller Coaster ကိုစီးမယ်ဆိုပြီး ၂ယောက်သား တွန့်ဆုတ်ဆုတ်နဲ့ တန်းစီလိုက်ပါတယ်... သူငယ်ချင်းက "ဖြစ်ပါ့မလား... ငါကြောက်လာဘီ... ထွက်ရင်မှီသေးတယ်" ပြောနေတုန်း ကျွန်မက သူ့ကို ဘာမှမကြောက်နဲ့ ငါတို့ မသေလောက်ပါဘူး... ကြောက်စရာမရှိပါဘူး... ဆိုပြီး အားပေးနေရင်း တဖြည်းဖြည်း စီးရခါနီးလေ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာလဲ ဖြစ်ပါ့မလားဆိုပြီး ကြောက်လာလေပါပဲ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပင်ပန်းထားပြီးလူက အားနည်းသလိုဖြစ်နေတော့ ဒါစီးပြီးရင် မူးပြီး တစ်နေကုန်အလကားဖြစ်မှာကိုကြောက်တာပါ... သို့သော် ခြောက်ကပါးနားမှာဆောက်ထားပြီး ဘေးက ပင်လယ်ဝကို မြင်နေရသလို... ပင်လယ်ဝအထက်ကနေသွားနေတဲ့ Cable car လေးတွေကိုမြင်နေရတဲ့ ရှုခင်းကလဲ အတော်လှပါတယ်... ဒီလို ရှုခင်းနဲ့ ဒီလိုခြောက်ကပါးပေါ်က Roller Coaster ကိုစီးရင် ဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းမလဲ သိချင်ပါတယ်...
Roller Coaster ဘေးကမြင်ကွင်း...
စီးဖြစ်တော့ ဇောက်ထိုးက အနည်းဆုံး ၃ ၄ ခါလောက်ဖြစ်ပါတယ်... ကျွန်မလဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး စီးနေပင်မဲ့ တစ်ချက် တစ်ချက်တော့ ဇောက်ထိုးမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆို ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်... တစ်ချိန်မှာ ကံဆိုးချင်တော့ ကျွန်မမျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်ချိန် ဇောက်ထိုးဖြစ်တာနဲ့ကြုံတော့ ပင်လယ်ဝနဲ့ တောင်တန်းတွေ ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း ၃၆၀ ဒီဂရီလည်ထွက်သွားတာကို ကြုံလိုက်ပါတော့တယ်... အဲဒိအချိန်မှာ လူက အံချင်သလိုဖြစ်ပြီး အရမ်းမူးနေပါပြီ... မြန်မာပြည်က Roller Coaster စီးရင် "ဒါပဲလား... ဘာမှတောင် မဖြစ်လိုက်ဘူး" ဆိုပြီး complaint များနေကျ ကျွန်မ ခုတော့ "ဘယ်တော့မှ ပြီးမှာလဲ... မြန်မြန်ပြီးပါတော့" လို့သာ မျက်စိလုံးလုံးမှိတ်ရင်း ဆုတောင်းမိနေပါတော့တယ်...
စီးပြီးတော့ မူးပြီး အီလည်လည်ကြီးဖြစ်သွားလို့... တစ်ခုခုအမြန်စားဖို့ ရှာရပါတော့တယ်... ဒီလိုနဲ့ပဲ ၀က်သားနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးအရည်နဲ့ ထမင်းကို HKD60 နဲ့ဝယ်စားဖြစ်တယ်... စာလို့လဲ မကောင်းပါ... အာသာလဲ မပြေပါ... သူငယ်ချင်းဝယ်လာတဲ့ မနက်က ဒင်းဆန်းဆိုင်က ပေါက်စီလဲစားလိုက်ပါတယ်... ဟီး... (Dolphin Show ကြည့်ပြီးတော့ ပိုအားရှိသွားအောင် Ice-cream နဲ့ ပြောင်းဖူးပြုတ်လဲ စားပါသေးတယ်... Ice-cream + water = HKD45, Steam Corn = HKD18)
စားလို့မကောင်းတဲ့ HKD60 တန် Lunch...
ပြီးတော့ Dolphin show ကြည့်ဖို့သွားတော့ ၃ခွဲမှပြမယ်တဲ့... ခုမှ ၂ခွဲပဲရှိသေးတော့ စောင့်ရမယ်... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မလဲ မူးနေတာနဲ့ ခုံဦးရင်း ထိုင်စောင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်... သူငယ်ချင်းကိုတော့ ကိုယ့်ကြောင့်ဆွဲထားသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ တခြားသွားချင်ရင်သွား ကျွန်မကတော့ ဒီမှာထိုင်ကျန်ခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ သူထွက်သွားပါတယ်... အဲဒိမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း အထုတ်တွေပေါ်ခေါင်းတင်ပြီး ခဏအိပ်ပျော်သွားပါသေးတယ်... ဘေးက ပြည်ကြီးတရုတ်တွေ ဆူဆူညံညံရောက်လာမှ နိုးသွားပါတယ်... ကြည့်လိုက်တော့ ခုံတွေအားလုံးပြည့်နေကြပြီ... သူငယ်ချင်းက ပြန်မလာသေးတော့ ကျွန်မဦးထားတဲ့ ခုံကို မျက်စောင်းထိုးနေကြတဲ့သူတွေလဲရှိနေတယ်... အိပ်လိုက်တော့ ခေါင်းနည်းနည်းပြန်ကြည်သွားတယ်... အနောက်တမ်းက ပြည်ကြီးတရုတ်မိသားစုက Burger တွေဝယ်စားပြီး ကလေးကို စပိုးနင့်အောင်ကျွေးနေကတည်းက တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်စိတ်ထဲထင်နေတာ... ပွဲပြီးခါနီးလောက်မှာ ဒီလောက် လူတွေများတဲ့ပွဲခင်းထဲမှာ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ အန်ချပါတော့တယ်... ဒါတောင် ဘေးကလူတွေကို တောင်းပန်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး... ကံကောင်းလို့ ကျွန်မဘက်မဟုတ်လို့ ဘေးက စုံတွဲကတော့ အနည်းငယ်ပေချင်သလိုဖြစ်သွားတယ်... ဒါပေမဲ့ ဘာမှ commotion လုပ်ပုံမပေါက်ပဲ manner ရှိပုံထောက်တော့ ဟောင်ကောင်စုံတွဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်... ကိုယ်လဲ သူငယ်ချင်းအတွက်ဦးထားတဲ့ ခုံဘက် အသာပြောင်းထိုင်လိုက်ပါတယ်... မကြာမီပဲ ပွဲပြီးသွားလို့သာတော်တော့တယ်... နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို လည်တဲ့အခါမှာ အဲဒိနိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမှု၊ ရှုခင်း၊ အစားအသောက်တွေအပြင်၊ ကြုံတွေ့ရတဲ့ လူပေါင်းစုံကလဲ အမှတ်ရစရာတွေဖြစ်စေသလို ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံတွေလဲ ပေးတတ်တဲ့အတွက် ဒါကိုလဲ အလေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်...
Dolphin show view...
အဲဒိနောက်တော့ ဘာမှထပ်မစီးဖြစ်တော့ပဲ ပန်ဒါတွေထားတဲ့နေရာဘက်လျှောက်ရင်း ဓာတ်ပုံပဲရိုက်ဖြစ်ပါတော့တယ်... ညနေစောင်းတော့မှ Hotel ခဏပြန်ပြီး သယ်ရရှုပ်တဲ့ Stand ကြီးထားခဲ့ပါတော့တယ်... (မထားခဲ့သင့်ဘူး.. ညဘက်ရှုခင်းက Stand နဲ့မှလှတာ) အဲဒိနေ့အတွက် နောက်တစ်နေရာကို သွားဖြစ်ပါတော့တယ်...
Panda လေး ၂ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်... ဒါက အမလေး...
Symphony of Light & Avenue of Star (Victoria Harbor)
ကိုယ်ရိုက်လာတာတွေမလှတော့ photo credit to www.Discoverhongkong.com
လူက ဘာရယ်မှန်းမသိ ပင်ပန်းနေတော့ စတန်းကို မသယ်ချင်တော့ပါဘူး... ဘာလို့လဲဆိုတော့ စတန်းသိပ်သုံးပြီးလဲ မရိုက်ဖြစ်လို့ပါ... အဲဒိနေရာက ကျွန်မတို့ ဟော်တယ်နဲ့ နီးပါးတယ်... Tim Sha Tsui MRT ကနေ Exit J ကိုထွက်ပြီး ၅မိနစ်ပဲလမ်းလျှောက်ရပါတယ်တဲ့... ကျွန်မတို့လဲ မမေးမဆန်းပဲ ဆိုင်းဘုတ်အားကိုးနဲ့ပဲလျှောက်လာပါတယ်... သူတို့ MTR ရဲ့ လှိုင်ခေါင်းတွေက စကာင်္ပူလို သိပ် မနီးပဲ အဝေးကြီး လျှောက်ရပါတယ်... အတော်လေးလျှောက်မှ Exit J ရောက်သွားပါတယ်... ထွက်ထွက်ချင်း မျှားနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ့လို့ အဲဒိအတိုင်းသွားပါတယ်... သွားနေရင်းကို နောက်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို မတွေ့တော့ပါဘူး... လမ်းလည်မှာတင် လမ်းပျောက်သွားပါတယ်... မြေပုံထုတ်ကြည့်တော့လဲ ကိုယ်ဘယ်ရောက်နေမှန်းရေရာ မသိ... နောက်ဆုံးတော့ အဖြူစုံတွဲကိုတွေ့တာနဲ့ သူတို့လဲ အဲသွားမှာထင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မှန်းနဲ့ သူတို့သွားတဲ့နောက် ခပ်မှောင်မှောင်ပန်းခြံဘက်ကို လိုက်သွားပါတယ်... မဟုတ်ရင်တော့ သွားဘီဆိုတဲ့ ဇနိုးဇနောင့်စိတ်ကလဲဖြစ်နေပါသေးတယ်.... အဲဒိစုံတွဲက ပန်းခြံတစ်နေရာရောက်တော့ သူတို့ကိုစောင့်နေတဲ့ အုပ်စုနဲ့တွေ့ပြီး စကားပြောပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်... ကိုယ်ကတော့ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ဆက်လျှောက်ရင်း လူတော်တော်များများ သွားတဲ့ ဘက်ကိုလိုက်ကာ နောက်ဆုံတော့ ရောက်သွားပါတယ်...
မြစ်ဘက်ကလာတဲ့ လေအေးအေးက မျက်နှာကို ရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ လူက လန်းဆန်းသွားသလို အရိုးထဲ တစ်ချက် ချမ်းစိမ့်ဝင်သွားပါတယ်... အဲဒိမှာ ရှိတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကို ခဏ၀င်နားထောင်ပြီး ၂ယောက်သား symphony of light ကြည့်ဖို့နေရာယူလိုက်ပါတယ်... ၂ယောက်လုံးက အရပ်ပုတော့ အရှေ့မှာနေရာရမှ ဖြစ်မှာလေ... ဟဲ ဟဲ... ရှိုးကို စောင့်ရင်း သူငယ်ချင်း ၂ယောက် ရာသီဥတုအေးအေးမှာ စကားတွေပြောကြ ရီကြတာလဲ ခင်မင်မှုကိုပိုခိုင်မြဲစေပြီး YUFL တက္ကသိုလ်တူတူတက်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေကို ပြန်လည်သတိရမိပါတယ်...
ည ၈နာရီမှာ Symphony of Light show စပါတယ်... ဒီဘက်ကမ်းကနေ တီးလုံးတွေနဲ့ ဟိုဘက်ကမ်းက အဆောက်အအုံးက မီးတွေ စီးချက်ညီညီကတဲ့ light show ပါ... Tourist attraction တစ်ခုအနေနဲ့ ညတိုင်း အလကားပြတာပါ... ကြည့်နေရင်းနဲ့ ငါတို့ နိုင်ငံက ရန်ကုန်မြစ်တို့ လှိုင်မြစ်တို့ကို အဲလို တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေ Light show လုပ်ရင်လဲ လှမှာ.... ကမ်းနားလမ်းက နန်းသီတာဆိပ်ကမ်းကို သားသားနားနား ပန်းခြံလေးလောက် လေညင်းခံဖို့လုပ်ပေးရင်တောင် အတော်ကောင်းမှာလို့တွေးမိတယ်... (ငယ်ငယ်က မီးပျက်ရင် မိသားစုတွေ နန်းသီတာဆိပ်ကမ်းကို ကားမောင်းပြီး လေညင်းခံ နေကြာစေ့စား စကားထိုင်ပြောတာ သတိရမိတယ်)...
At Victoria Harbor... လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ ရာသီဥအေးအေးနဲ့ အေးဆေးလမ်းလျှောက်ရတာကိုကြိုက်တယ်...
Symphony of Light ပြတဲ့ နေရာမှာပဲ Avenue of stars ရှိပါတယ်... ဟောင်ကောင် နာမည်ကြီး အနုပညာသမားတွေရဲ့ လက်ရာတွေကို လမ်းတစ်လျှောက် မြေပေါ်မှာ မြုပ်ထားပါတယ်... ရာသီဥတုလေးက လေတဖြူးဖြူးနဲ့ စိတ်လက်ကြည်နေပင်မဲ့ တစ်ခါတစ်လေတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြည်ကြီးတွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်... ဥပမာ အစကဘယ်သူမှ မရှိတဲ့နေရာ ကိုယ်ဓာတ်ပုံရိုက်မှ အတင်းပြုံဝင်လာပြီးရိုက်တာတို့... သူများရိုက်နေလဲ ဖြတ်လျှောက်တာတို့... သူတို့ရိုက်ပြီးသွားလဲ အဲဒိနေရာမှာရပ်ပြီး မဖယ်ပေးပဲ ဓာတ်ပုံကို ပြန်ကြည့်နေတာတို့... ဒါပေမဲ့ သူတို့ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရတာ မတန်တာရော ညဘက်ဖြစ်တာရောကြောင့် သိပ်တောင် ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်တော့ပဲ... ရောက်နေတဲ့အချိန်လေးကိုပဲ အပြည့်အ၀ခံစားလိုက်ပါတယ်... ဓာတ်ပုံရိုက်များတဲ့ နေရာတွေလဲ ကိုယ်ပဲ ရှောင်နေလိုက်ပါတယ်... Moment ကိုပဲ enjoy နေလိုက်ပါတယ်...
ချောင်ယွမ်ဖက်... ကျွန်မရဲ့ killer မင်းသားကြီး...
Tony Leong, နဂါးနိုင်ဓားက မင်းသား.. တခြားသူ့ကားတွေလဲ အများကြီးကြည့်ဖူးတယ်..
Stephen Chow - ဟာသမင်းသား...
Hong Kong pride Bruce Lee
ငါးခြောက်နံ့မွှေးမွှေးလေးက လေအဝှေ့မှာ တစ်ချက်တစ်ချက်ရနေတော့ ငါးမကြိုက်တဲ့ ကျွန်မတောင် စားချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်... အဲဒိ တောက်လျှောက်မှာ လှည်းလေးတွေနဲ့ ပြည်ကြီးငါးကို စက်နဲ့ပြားနေအောင်လုပ်ပြီး ကင်တဲ့ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ ရာသီဥတုအေးအေးမှာ အဲဒိပူပူလေးစားရင်ကောင်းမှာပဲ... လိုက်ဖက်လို့ ရောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး Try ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်... စားကြည့်မှ ညှီလိုက်တာ မပြောပါနဲ့... ကိုယ်က ငါးမကြိုက်လို့လားတော့ မသိဘူး... အရမ်းညှီတယ်လို့ ခံစားရတယ်... ပြီးတော့ ငါးခြောက်က စိတ်ထဲထင်ထားတဲ့ မြန်မာငါးခြောက်လို လုံးလုံးခြောက်တာမဟုတ်ဘူး... ပြည်ကြီးငါး အစိုအပြားကို မြန်မာပြည်က ကြံရည်ကျိတ်စက်လိုမျိုး သူတို့ကတော့ အပူဒလိမ့်တုံး ၂ခုကြားကို ၃ ၄ ၅ခါလောက် ဖြတ်ထည့်လိုက်တာ... ကိုယ်တင်မဟုတ်ဘူး... သူငယ်ချင်းလဲ မကြိုက်ဘူး...
အပြန်ကိုတော့ ကျွန်မတို့ ၂ယောက် ဟိုတယ်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်ရင်း တွေ့တဲ့ restaurent မှာပဲ ၀င်စားဖြစ်တယ်... ကျွန်မက ထမင်းကြော်စားတယ်... HKD55 ကျတယ်... ပြီးတော့ SaSa Store ၀င်ဖြစ်တယ်... SaSa store က ဟောင်ကောင်က လမ်းတိုင်း နေရာတိုင်းလိုလိုမှာရှိတယ်... စကာင်္ပူမှာရှိတဲ့ SaSa store တွေထက်တောင်ကြီးတယ်... အစုံလဲရတယ်... သူ့သူငယ်ချင်းမှာလိုက်တဲ့ Face mask ၀င်ဝယ်... ကျွန်မကတော့ လျှောက်ကြည့်ရင်း လိုချင်တာဝယ် အပြီး ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တယ်...
နောက်နေ့တော့ ရေလမ်းခရီး မကာအိုကိုသွားပြီး နာမည်ကျော် ခရစ်ယာဉ် Saint Paul ဘုရားကျောင်းပျက် ကြီးဆီ အရောက်သွားရအုံးမယ်...
Posted by mabaydar at 5:59 PM 8 comments :
Labels: ခရီးသွားမှတ်တမ်း , ဓာတ်ပုံ , ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်
Hong Kong Trip - Day2report (Trip to Tian Tan Buddha)
ခရီးစဉ် Highlight ဘုရားကြီးဆီသို့....
မနက်စာ Hong Kong Famous Dim Sum...
ကျွန်မအတွက်တော့ ခရီးတစ်ခုကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စီစဉ်ပြီး Backpacker အနေနဲ့ သွားတာဟာ ခရီးသွားအဖွဲ့တွေနဲ့သွားတာထက် ရင်ခုန်စရာပိုကောင်းတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ကိုယ်စားချင်တာကို ရင်ခုန်စွာလိုက်ရှာရတာလဲ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ…
ဒုတိယနေ့အစမှာတော့ ၂ယောက်လုံး ဇွဲရှိရှိနဲ့ မနက် ၅နာရီခွဲလောက်ကတည်းက အိပ်ယာထ ပြင်ဆင်ပြီး ၇နာရီလောက်မှာ ထွက်ခဲ့ပါတယ်... ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်မဟောင်ကောင်ကို လာရခြင်းအကြောင်းထဲက အဓိကဖြစ်တဲ့ ဒင်းဆန်း (Dim Sum) စားခြင်းနဲ့ Tian Tan Giant Buddha ဘုရားကြီးရှိတဲ့နေရာကို သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်...
ကံအားလျော်စွာပဲ ဟော်တယ်နဲ့ မနီးမဝေးမှာပဲ ဆိုင်အပြင်အဆင်အသင့်အတင့်နဲ့ ဒင်းဆန်းဆိုင်လေးဖွင့်နေပါပြီ... ဒင်းဆန်းက စကာင်္ပူနဲ့ ယှဉ်ရင် အရမ်းသက်သာမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း အဲဒိဆိုင်ကတော့ ထင်သလောက်အရမ်းတော့ မသက်သာပါဘူး ("အရမ်း" လို့ပြောထားတဲ့အတွက် သက်တော့ သက်သာတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်)... အရသာနဲ့ပတ်သတ်လို့ကတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး... ကျွန်မစားချင်တဲ့ ဒင်းဆန်းအရသာမျိုးကို ထိထိမိမိစားလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်... နိုင်လွန်ပုဇွန်ကလဲ လတ်ဆတ်ပြီး စားလိုက်ရင် ထုတ်ထုတ်မြည်ကာ ပုဇွန်တွေလဲ များပါတယ်... ပူနွေးနွေး အသားကင်ပေါက်စီကလဲ ဂျုံသားကနူးညံ့လတ်ဆတ်ပြီး အထဲက အသားအရသာကလဲ ပေါ့ပျက်ပျက်မဟုတ်ပဲ ထိထိမိမိရှိပါတယ်... ၀က်နံရိုးကလဲ အနှံ့ကမွှေးကြိုင်နေပြီး အသားကနူးအိ အရသာစိမ့်ဝင်လို့နေပါတယ်... သာမာန်အားဖြင့် စကာင်္ပူမှာရော မြန်မာပြည်တုန်းကရော အသားလုံးမကြိုက်တဲ့ကျွန်မ ဟောင်ကောင်မှာစားသမျှ အသားလုံးတိုင်းက ကျွန်မကို အသားလုံးတကယ်ကောင်းရင် စားလို့ကောင်းပါလားဆိုတဲ့ အသိကိုပေးခဲ့ပါတယ်... ထပ်စားချင်ပေမဲ့ အချိန်မမှီမှာရော နောက်နေရာတွေမှာ အစားကောင်းတွေ ထပ်တွေ့အုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်တာရောကြောင့် ဒီလောက်ပဲစားပြီး ထွက်ခဲ့ပါတယ်... ဒါတောင် တော်တော်ဗိုက်ပြည့်သွားပါတယ်... စုစုပေါင်း ဟောင်ကောင် ၇၈ ဒေါ်လာကျပါတယ်... ၆နဲ့စားရင် စလုံးဒေါ်လာ ၁၃ လောက်ကျပါတယ်...
Hong Kong ကို နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားဖို့စဉ်းစားရင် ဒင်းဆန်းစားချင်တာလဲ အချက်၁ချက်ဖြစ်မယ်...
Tian Tan Giant Buddha ဆီသို့...
Tian Tan Giant Buddha က Lantau Island ပေါ်မှာရှိတာပါ... လေယာဉ်ကွင်းရှိတဲ့ ကျွန်းပေါ့... ကျွန်မတို့နေတဲ့ မြို့လည်ခေါင်ကနေ Tung Chung MTR ဂိတ်ကိုရောက်ဖို့ ၄၅ မိနစ်လောက်စီးလိုက်ရပါတယ်... LanTau ကျွန်းဘက်ကို အဖြတ်ကနေ စပြီး မြို့ပြရှုခင်းမျိုးတွေ မဟုတ်တော့ပဲ သဘာဝရှုခင်းတွေကလဲ ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲကြည့်နူးစရာပါ... ပင်လယ်ပြင်ကြီးဘေးကနေ MTR ဖြတ်စီးတဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ရှုခင်းကလဲ ကျွန်မတွက်တော့ ပထမဆုံးပေါ့... အစက အိပ်ငိုက်နေတာတောင် ပြေသွားပါတယ်...
အဲဒိ MTR ကထွက်ထွက်ချင်းမှာ Factory outlet sale ရှိပြီး Branded တွေကို wholesale price မျိုးနဲ့ ရောင်းတဲ့ shopping mall ရှိပါတယ်… ကျွန်မတို့ရောက်သွားတဲ့ မနက် ၉နာရီလောက်မှာ မဖွင့်သေးပါဘူး… ကိုယ်လဲ နောက်ကျမှာစိုးတာနဲ့ အပြန်မှပဲ ၀င်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်… သူငယ်ချင်းကတော့ အဲဒိကို အတော်ဝင်ချင်ပုံရပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အတိုင်း ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင် လျှောက်လိုက်ရင်ပဲ Tourist လို ပုံစံမျိုးတွေတွေ့တဲ့နေရာမှာ မေးမြန်းကြည့်တော့ Cable car က မဖွင့်သေးဘူးတဲ့… Cable car ကို Ngong Ping 360 လို့ခေါ်ပါတယ်...
အဲဒိအချိန်မှာပဲ လူကြီးတစ်ယောက်က တန်းစီလို့ရဘီဆိုပြီး စီခိုင်းပါတယ်… ကျွန်မတို့လဲ ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ၀င်စီလိုက်ပါတယ်… လက်မှတ်လဲ မ၀ယ်ရသေးပါဘူး… ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်းလဲ မသိပါဘူး… နောက်မှ ကျွန်မတို့ရှေ့က ဘိုမ ၂ယောက်နဲ့ စကားပြောရင်း သူတို့က အသွားကို Cable car စီးပြီး အပြန်ကားနဲ့ ဆင်းဖို့ ၀ယ်လာပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကားနဲ့ အပေါ်ကိုတက်ရင် ဘယ်ဂိတ်က ဘယ်လိုစစီးပြီး ဘယ်ဂိတ်ဆင်းရမှန်း ရေရေရာရာ မသိတာရော ဘာရောမို့ပါ… ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့လဲ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ ကောင်တာကိုသွား ရှိတဲ့ Package တွေကို တိုက်ကြည့်… ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစား…. နောက်တော့လဲ သူတို့လိုအစီအစဉ်က အကောင်းဆုံးမို့ ကျွန်မတို့လဲ အဲလိုပဲ ၀ယ်လိုက်ပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပေါ်မှာ ဘာတွေရှိမှန်းကိုယ်က မသေချာသေးတော့ ဘတ်စ်ကားစီးပြီးတက်ရင် အချိန်ကုန်မှာမို့ အသွားကို cable car စီးပြီး အပြန် bus နဲ့ အေးဆေးဆင်းဖို့ပါ... cable car ၁ကြောင်းနဲ့ ဘတ်စ်ကား ၁နေကုန် ကြိုက်သလောက်စီးကို ဟောင်ကောင် ၁၀၄ ဒေါ်လာကျပါတယ်...
ရင်ခုန်စရာ Cable Car...
မကြာခင်ပဲ Cable car ဖွင့်ပါတယ်… Cable car က ၂မျိုးရှိပါတယ်…. ၁မျိုးက car အောက်ခြေက ဖန်အကြည်ဖြစ်ပြီး အောက်ကို မြင်နေရတာရယ်… နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရိုးရိုးအပိတ်ပါပဲ… မှန်အကြည်နဲ့က ဈေးပိုပေးရပါတယ်... သူငယ်ချင်းက ဖန်အကြည်နဲ့ဟာမစီးရဲတာနဲ့ ရိုးရိုးအပိတ်ပဲစီးပါတယ်... cable car ထဲရောက်ပြီး အဆောက်အအုံထဲက ထွက်လိုက်တာနဲ့ တောင်လေအေးအေးတွေက ရှိတဲ့ အပေါက်တွေကနေ စိမ့်ကနဲ အေးကနဲဝင်လာပါတော့တယ်... တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာနဲ့အမျှ အနောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ မြို့ပြနဲ့ ပင်လယ်ဝရဲ့ ရှုခင်းက ကြည့်ချင်စရာကောင်းသလို ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်း၂ယောက်လဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စကြပါတော့တယ်... :) ...
Cable car ပေါ် ၅မိနစ်လောက်ရောက်အပြီး မြင်ကွင်း...
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တောင်တွေဘက်ကိုရောက်လာတော့လဲ အောက်က လူသွားတောလမ်းသေးသေးလေးကိုမြင်နေရပြီး လျှောက်ချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်... သူငယ်ချင်းကတော့ "မလျှောက်ရဲပေါင်" လို့ချက်ချင်းဖြေပါတယ်... အဲဒိတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာ Pre-wedding ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လှမှာပဲလို့တွေးမိတယ်... ဒါပေမဲ့ အဲလိုဝတ်စုံကြီးတွေဝတ်ပြီး ဒီတောင်ကုန်းပေါ်ရောက်ဖို့တော့ ခက်လိမ့်မယ်... ရာသီဥတုနဲ့ ရှုခင်းတွေ တ၀ကြီး ခံစားခွင့်ရတဲ့အတွက် cable car စီးရတာ တန်တယ်လို့ထင်မိတယ်... မိနစ် ၂၀ လောက်စီးအပြီးမှာတော့ တောင်ထိပ်ပေါ်က ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးကို လှမ်းမြင်ဖူးမြှော်နိုင်ပါပြီ... တောင်တန်းတွေထဲက တောင်ထိပ်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးကို မြင်တွေ့ရတာ စိတ်ထဲမှာ ကြည်ညိုမိသလို... ကိုယ်တစ်နေ့တော့ ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နေရာထဲက တစ်နေရာကို ရောက်ပြီဆိုတဲ့ အတွေးကလဲ ၀မ်းသာမဆုံးပါပဲ...
ဖူးမျှော်ချင်တဲ့ ဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်ရတဲ့အတွက် အိပ်မက်လိုပါပဲ...
ဒီဓာတ်ပုံတွေသာ ကိုယ်တိုင်မရိုက်ခဲ့ရင် ဒီအိပ်မက်ဆန်ဆန် ရှူခင်းကို တွေ့ကြုံခဲ့ရတာကို ယုံဖို့ခက်မယ်...
နောက် ၅ မိနစ် ၆ မိနစ်လောက်မှာတော့ cable car station ဖြစ်တဲ့ ဘုရားကြီးတောင်ခြေမှာရှိတဲ့ Ngong Ping Village ကိုရောက်ပါတယ်... ရွာသာပြောတယ် လူနေအိမ်ခြေလဲမရှိဘူးထင်ပါတယ်... ဈေးဆိုင်တွေ ပြတိုက်တွေပဲ ရှိပါတယ်... ကျွန်မတို့ရောက်တဲ့အချိန်က အနည်းငယ်စောနေသေးတဲ့အတွက် အဲဒိ ရွာထဲမှာ ဘာဆိုင်မှ သိပ်မဖွင့်သေးပါဘူး... ဒီလိုနဲ့ အဲဒိရွာလမ်းအတိုင်း လျှောက်လာရင်း ဘုရားကြီးနဲ့ ပိုပိုနီးနီးလာပါတယ်.... နောက်ဆုံး ဘုရားကြီးတောင်ခြေရောက်တော့ တွေ့လိုက်ရတဲ့ လှေကားထစ်တွေ ပုံထဲကအတိုင်းပါပဲ... ကျွန်မအရင်ကထင်ထားတာက လှေကားက မတက်ချင်ရင် ဓာတ်လှေကားဖြစ်စေ... တခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်စေ ရှိမယ်ထင်ခဲ့တာ... ဒါပေမဲ့ မရှိပါဘူး... အဲဒိလှေကားတွေကို ကိုယ်တိုင်တက်ရပါမယ်... သူငယ်ချင်း၂ယောက်လဲ မိန်းကလေးပီပီ တစ်ယောက်ကို အလှပြင်ပစ္စည်း ပိုက်ဆံအိပ် ပတ်စပို့ရေဗူး စသည်ဖြင့် ဘာညာသာရကာတွေပါတဲ့အထဲကမှ... ဗွီဒီယိုကင်မရာရယ်... ဓာတ်ပုံကင်မရာရယ်.. ဒေါက်တံရယ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေက မနည်းမနောပါပဲ... ကဲ... ယူလာချင်အုံး.. ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် လှချင်အုံးဟဲ့... သယ်လိုက်အုံးဟဲ့.... ဆိုပြီး လှေကားတစ်ကန့်တက်လိုက် နားလိုက်နဲ့ ကိုယ့်နောက်မှတက်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် ကိုယ့်ပြန်ကျော်တက်သွားပါတယ်...
Cable car station က အထွက် Ngong Ping ရွာဝင်ဝ
တကယ်ရောက်ချင် တကယ်သွား အဟုတ်ရောက်ရမည်...
ဘုရားကြီးရင်ပြင်ပေါ်ရောက်တော့ ဘုရားဖူးပြီး ၂ယောက်သား ထိုင်နားနေလိုက်ပါသေးတယ်... နေ့လည်ရောက်ခါနီးနေဆိုတော့ အနည်းငယ်ပူပင်မဲ့ အရိပ်ထဲရောက်သွားတာနဲ့ ရာသီဥတုက အေးစိမ့်နေပါတယ်... နားနေပီးမှ အတွင်းဘက်ဝင်ကြည့်တော့ ဆုံးပါးပြီးသွားသူများရဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ပြာအိုး(ရှိမရှိမသေချာပါ) ထားတာတွေ့ရပါတယ်... အဲဒိအထဲမှာ ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယို ရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး... အဲဒိထဲမှာ ဟောင်ကောင်နာမည်ကျော် အဆိုတော် မင်းသမီး Anita Mui ရဲ့ အရိုးပြာအိုးနဲ့ နာမည်ကိုလဲတွေ့ရပါတယ်... သူ့နာမည်ထားထားတဲ့နေရာမှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အမှတ်တရရေးဖို့ စာအုပ်ထားထားပါတယ်... နိုင်ငံတကာက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဆုတောင်းတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်... ကျွန်မနဲ့ သူငယ်ချင်းလဲ မြန်မာက ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ မြန်မာလိုရေးပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်...
Po Ling သတ်သတ်လွတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ အလည်တစ်ခေါက်...
Po Ling Monastery အပြင်ရှိ မုဒ်ဦး... ဘုရာကြီးတောင်ခြေ...
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သတ်သတ်လွတ်ထမင်း အလကားကျွေးတယ်တော့ပြောတယ်... ဘယ်မှာသွားစားရမှန်းမသိခဲ့ဘူး...
ဘုန်းကြီးကျောင်းအထွက်က မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ...
တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီး အနီးနားက Po Lin ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၀င်ပါတယ်... ဒီဘုရားကြီးကို Po Lin ဘုန်းကြီးကျောင်းက ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာလို့ ၀ီကီမှာတွေ့ရပါတယ်... ဘုန်းကြီးကျောင်းကအထွက် လာလမ်းတိုင်း ပြန်လျှောက်ရင်း တွေ့တဲ့ဆိုင်တွေက သိပ်ကောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ပင်မဲ့ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ Ngong Ping Village မှာ ဆိုင်တွေရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ မသိခဲ့ပါဘူး... ကျွန်မတို့ မနက်ကလာတုန်းက စောသေးတော့ အဲဒိရွာက ဘာဆိုင်မှ ဖွင့်မထားပါဘူး... ဒီတော့ ရှေ့ဆက်သွားလို့ မရှိရင် ပြန်လျှောက်ပြီး အချိန်ကုန်မှာစိုးတာနဲ့ နီးနားကတွေ့တဲ့ဆိုင်မှာပဲ ဖြစ်သလိုစားလိုက်ကြပါတယ်... အမဲသား ကြာဇံပြုတ်ပါ... ဘာအရသာမှ သိပ်မရှိပါဘူး... ဗိုက်မ၀လို့ ရှေ့က ပြောင်းဖူးပြုတ်ဝယ်စားပါတယ်... နောက် soya bean curd ၀ယ်စားပါတယ်... တော်ရုံကျွန်မ Soya Bean Curd မကြိုက်ပင်မဲ့ အဲဒိက Bean Curd ကတော့ ဂျင်းနံ့မွှေးမွှေးလေးမို့ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်...
နောင်တရခဲ့တဲ့ နေ့လည်စာ.. ဂျင်းနံ့နဲ့ soya Bean လေးကတော့ တမျိုးလေးကောင်းတယ်...
ကျွန်မအဲဒိမှာသွားချင်တဲ့နေရာတစ်ခုက Wisdom Path ဆိုတဲ့နေရာပါ... အနီးနားမှာရှိတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ ဘယ်လိုသွားရမှန်းမသိပါဘူး... ကျွန်မထင်ခဲ့တာက ဘတ်စ်ကားစီးပြီး နောက်တစ်တောင်ကို သွားရမယ်ထင်နေတာပါ... သေချာ Research မရှာခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေပေါ့... ဟိုရောက်မှ ကြည့်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့တာ နောက်မလုပ်မိအောင် သင်ခန်းစာရပါတယ်... နေ့လည်စာ စားပြီး Ngong Ping Village ကို ပြန်အဖြတ်မှာ နောင်တကြီးစွာရပါတော့တယ်... စားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီးမှ ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ့ကိုက်မဲ့ အစားအစာမျိုးတွေ Starbuck တို့ ဘာတို့လိုဆိုင်မျိုးတွေအစုံနဲ့ စည်စည်ကားကားဖြစ်နေတာတွေ့တော့ အရသာမရှိတဲ့ ကြာဇံပြုတ်ကြောင့် ပြည့်နေတဲ့ဗိုက်ရယ်၊ အဲဒိဆိုင်မှာ ထိုင်စားခဲ့တဲ့အချိန်ရယ်ပြန်မရနိုင်တော့တာမို့ ရင်နာစွာနဲ့ မစားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး...
Ngong Ping Village က ဗုဒ္ဓ၀င်ပြခန်းရှေ့... ၀င်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး... သူများတွေပြောတော့ ကောင်းတယ်တော့ပြောတယ်...
Ngong Ping ရွာထဲမှာ ဟောသလို ဆိုင်ကောင်းတွေ စားဖို့ရှိတယ်... အဟင့်....
မျက်စိလည် ရောက်ခဲ့တဲ့ Tai O Fisherman Village...
ကျွန်မတို့ ၂ယောက်လဲ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို သွားပြီး သူများတန်းစီနေတဲ့နေရာကို စီလိုက်ပါတယ်... စီနေတဲ့သူတွေက စလုံးလူမျိုးတွေပါပဲ... မမေးမမြန်းပဲ သူများစီလို့လိုက်စီတာ မကောင်းမှန်း သင်ခန်းစာရခဲ့တာပါ... သို့သော် လုံးလုံးတော့ မဆိုးဝါးခဲ့ပါဘူး... အတွေ့ကြုံသစ်ပေါ့... အဲလိုသာ မမှားခဲ့ရင် Tai O Fisherman Village ကို ကျွန်မရောက်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး... စစချင်းတော့ သွားချင်တဲ့ Wisdom Path ကို မရောက်လို့ စိတ်အတော်လေးတိုခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ Tai O Fisherman village ကလဲ ကျွန်မသွားချင်တဲ့ list ထဲမှာပါပါတယ်... ကျွန်မကအဲဒိကို သွားချင်ခဲ့ပင်မဲ့ သူငယ်ချင်းက သိပ်သွားချင်ပုံမရလို့ မသွားတော့ပါဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာပါ... ဒါပေမဲ့ ရောက်သွားပါတယ်... တံငါရွာလေးပါပဲ... ခြေတံရှည်အိမ်လေးတွေကို ရေစပ်မှာဆောက်ထားတာလဲ တွေ့ရပါတယ်... ပင်လယ်စာ ငါးခြောက်တွေ ကမာတွေ အစုံရောင်းတဲ့ ဈေးတန်းလေးကို ဖြတ်ပြီး ရွာအတွင်းပိုင်းကို ၀င်လာပါတယ်... ငါးခြောက်တွေကတော့ အတော်လေး ဈေးချိုမဲ့ပုံပါပဲ... သို့သော် မသယ်နိုင်တာရယ်၊ ကျွန်မက ငါးမကြိုက်တာရယ်၊ အနံ့နံတာရယ်ကြောင့် ငါးကြိုက်တဲ့ ဖေဖေသာပါရင် ဆိုပြီး စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်...
Mood မကောင်းသော်လည်း ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ အမှတ်တရ ပြုံးပြုံးလေးနော်...
ရွာဝင်ဝက ပင်လယ်စာ ဈေးတန်းလေး... လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ ဈေးချိုတယ်...
တံငါရွာဘ၀.... တံငါရွာ အလှ...
ရွာလည် တံတားပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ... ရွာထဲမှာတော့ သဗ္ဗာန်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုက်ကားနဲ့ ခြေလျင် ပို့ဆောင်ရေးပဲသုံးကြတယ်ထင်တယ်... ရွာထိပ်က ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကလွဲလို့...
စားခဲ့တဲ့ နေ့လည်စာကို နောင်တနောက်တစ်ကြိမ်အကြီးအကျယ်ရတာကတော့ Seafood restaurant ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပါ... တံငါရွာမှာ Seafood လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ဟောင်ကောင်စတိုင်ချက်လေးနဲ့ လွေးလိုက်ရရင်ဖြင့် ဟင်း.... ဟင်း.... အဲဒိအချိန်မှာလူက Wisdom path သွားချင်တာ မရောက်... မကောင်းတဲ့နေ့လည်စာကြီးစားလာလို့ စိတ်ကတို... အထုတ်တွေသယ်လာရတာ လူက ပန်းနေပါဘီ... ဈေးတန်းထဲမှာ လိမ္မော်သီးအကြီးကြီးတွေရောင်းတာတွေ့တာနဲ့ ဈေးမေးတော့ ၄လုံးမှ ဟောင်ကောင် ၁၀ တဲ့... လိမ္မော်သီး အကြီးကြီး ၄လုံးကို စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၁ကျပ်ကျော်လောက်ပဲကျပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ဘာဆိုဘာမှ သယ်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မက လက်တလောစားဖို့ ၂လုံးလောက်ပဲရောင်းပါဆိုတော့ ဈေးသယ်အဘွားအိုက သဘောကောင်းစွာပဲရောင်းပါတယ်... ပိုက်ဆံတောင် ပြန်အမ်းစရာ သူ့ခမျာမရှိပါဘူး... လိမ္မော်သီးဝယ်ပြီး ရွာထဲကို ဆက်လျှောက်ရင်းစားတော့မှ ပြီးပြည့်စုံပြီး လန်းဆန်းသွားစေတဲ့ အရသာရှိလှတဲ့ လိမ္မော်သီးကြောင့် ကျွန်မအားတွေပြန်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်.... ၄လုံးဝယ်ခဲ့ကောင်းသားဆိုပြီး မိန်းမသားသဘာဝ လောဘကြီးနောင်တရလိုက်ပါတယ်... အဲဒိအချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေချည်းပဲမလာပဲ ချစ်သူဖြစ်စေ၊ ယောကျာင်္းလေး သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ၊ မောင်တွေဖြစ်စေ အထုတ်သယ်ပေးခိုင်းဖို့ ပါလာရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တောင့်တမိပြန်ပါတယ်... (ဒီလိုအချိန်တွေဆို သူတို့လေးတွေကို သတိတရပေါ့)
ရွာလမ်းဆုံးမှာ ဟောဒီဘုရားကျောင်းလေးနဲ့ ရှောင်လင်သိုင်းကျင့်တဲ့ ကွင်းလေးတွေ့ပါတယ်...
Finally To Wisdom Path...
အဲဒိရွာက ကားဂိတ်မှာပဲ Wisdom Path ကို ဘယ်လိုသွားရလဲသွားမေးတော့... တော်တော်များများကလဲ အင်္ဂလိပ်လိုသိပ်မပြောတတ်ပါဘူး... တတ်သလောက် Chinese နဲ့ ၂ယောက်သားမေးတော့လဲ သူတို့က ကားလာရင်ပြောမယ်တဲ့... ကားလာတော့ တက်လိုက်သွားပါတယ်... ရောက်သွားတဲ့နေရာက Ngong Ping Village ကိုပါပဲ.. အဲဒိအချိန်မှာ အချိန်က ညနေတောင်စောင်းနေပါပြီ... လူကလဲ ကိုယ်သွားဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာကို မရောက်လိုက်မှာကို စိုးရိမ်ပြီ စိတ်တွေတိုလာပါပြီ... သူငယ်ချင်းကတော့ သိပ်တောင် မသွားချင်တော့တဲ့ပုံပေါက်ပင်မဲ့ ကျွန်မ သွားချင်နေတော့ သူ့ခမျာလိုက်မေးပေးရှာပါတယ်... (တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မက စိတ်တိုလွယ် စိတ်ပျော့လွယ်မို့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ခုလို သည်းခံနိုင်တဲ့သူတွေရှိနေတာကို သိပ်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်)... လူတွေတစ်ယောက်မေးရင်လဲ ပြတဲ့ လားရားက တစ်ယောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်... နောက်ဆုံးအဲဒိမှာ မဏ္ဍပ်ထိုးအလှူခံနေတဲ့သူတွေကိုသွားမေးမှ အဲဒိက ခပ်ချောချောအင်္ဂလိပ်လိုလဲ အတော်လေး ဘိုသံပေါက်အောင်ပြောတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က လည်လည်ဝယ်ဝယ်ဖြေပါတော့တယ်... ဒါတောင် သိပ်နားမလည်လို့ သူ့ကို အဲဒိနားက မြေပုံထောင်ထားတဲ့နေရာကို ခေါ်ထုတ်လာပြီး ပြခိုင်းတော့မှ ဘုရားကြီးတောင်ခြေကနေ တည့်တည့် (ဘုရားကြီးတောင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတောလမ်း)ထဲကို မိနစ် ၃၀လောက်လျှောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်... သူက "ဝေးတယ်နော် လျှောက်နိုင်ပါ့မလား တောလမ်းနော်" လို့ သတိပေးတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းမျက်နှာသေးသေးလေးပဲကျန်ပါတယ်...
ဘုရားကြီးကနေ Wisdom Path သွားတဲ့မြေပုံ
ကျွန်မကတော့ ကျွန်မသွားချင်တဲ့နေရာကို မရောက်အောင် အဖျက်တွေတားနေတယ်လို့ခံစားရပြီး... "ငါ့ကို ဒီလိုလာတားလို့မရဘူး" ဆိုပြီး သွားမယ်ပဲဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်... အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကြိုဖတ်ခဲ့လို့ လက်မှိတ်ဓာတ်မီး တစ်ခု ကျွန်မထည့်လာပါတယ်... ညနေစောင်းရင် တောလမ်းတွေက မြို့ပြထက် ပိုမှောင်တယ်ဆိုတာကိုလဲ ကျွန်မသိပါတယ်... ကျွန်မသူငယ်ချင်းကို "မလိုက်ချင်လဲ နင်ဒီမှာစောင့်နေခဲ့... ငါကတော့ မရောက်ရောက်အောင်သွားမယ်... မဟုတ်ရင် ဒီကို ကားနဲ့ ပြန်တက်လာတဲ့ အချိန်အလကားဖြစ်သွားမယ်" လို့ပြောလိုက်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ သူမလိုက်ရင်တော့ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း တောလမ်းလျှောက်ရမှာတော့ ကျွန်မကြောက်ပါတယ်... ကြောက်သော်ငြားလဲ ကျွန်မသွားမှာပါ... သို့သော် သူငယ်ချင်းကလဲ နေခဲ့ရမှာလဲ ကြောက်... သူလဲ အဲဒိနေရာကို ရောက်ချင်ပုံရပါတယ်... လိုက်လာပါတယ်... ပါးစပ်ကတော့ တပ်ခေါက်ဖို့ပဲ ကျွန်မကို အကြိမ်ကြိမ်နားချချင်ပါတယ်... တောစပ်ဝကို ရောက်တော့ အပေါ်တောလမ်းကနေ အမေရိကန် လင်မယား ၂ယောက် ဆင်းလာပါတယ်... ဒါနဲ့ ကျွန်မလဲ သူတို့ကို wisdom Path ကို ဘယ်လမ်းလဲမေးတော့ သူတို့လဲ အဲဒိသွားမှာလို့ပြောပါတယ်... "အတော်ပဲ ငါတို့လဲ ကြောက်လို့ မသွားလဲမသွားတတ်ဘူး" လို့ပြောတော့ သူက ကြောက်စရာမရှိပါဘူးတဲ့... ယောကျာင်္းက အသက်ကြီးကြီးဆိုပေမဲ့ ပျော်တတ်တဲ့ပုံပါပဲ... မိန်းမက အရမ်းမငယ်ပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ လှတယ်... အဲလူကြီးက အမေရိကန်လေသံနဲ့ ဘာတွေပြောပြီး ရီသလဲမသိဘူး... ကျွန်မရော သူငယ်ချင်းရောကလဲ ကြောက်စိတ်ရယ် အတွေးကိုယ်စီရယ်ဆိုတော့ သူ့လေသံကိုလဲ မဖမ်းမိပါဘူး... သူရီတော့ ကိုယ်လဲလိုက်ရီ... သူက မေးခွန်းပဲမေးသလားဘာလားတော့မသိဘူး... နောက်တော့ အဲလူကြီးလဲ ပါးစပ်ပိတ်သွားရော... အဟိ...
ကျွန်မကြောက်တာက သရဲထက် လူကို ပိုကြောက်ပါတယ်... (ကြောက်စရာ လူမရှိရင်တော့ သရဲကြောက်ပါတယ်) သူငယ်ချင်းကတော့ အဲဒိလူတွေနဲ့ ထပ်ချက်မခွာလိုက်ချင်ပါတယ်... တဖက်က ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမြင်ရရုံလောက်ကပဲ လိုက်ချင်ပါတယ်... ကျွန်မဆန္ဒပြည့်ပါတယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ခြေလှမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ ဘာပစ္စည်းမှလဲ မသယ်ထားတော့ အရမ်းမြန်ပါတယ်... ကျွန်မတို့လိုက်မမှီပါဘူး... အဲဒိအသွားလမ်းမှာ စားသောက်ဆိုင်အဟောင်းကြီးမှာ(မြေပုံထဲက Tea Garden) ဘယ်သူမှလဲ မရှိပဲ အရုပ်တွေကိုပဲ တိုင်တွေမှာချည်ပြီး စာခြောက်ရုပ်သဘောမျိုးထားထားတဲ့ ဆိုင်ကိုတွေ့တော့ Creepy ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မခံစားရပင်မဲ့ အတွေးကို ချက်ချင်းဖြတ် ကြောက်စိတ်ကို အမြစ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်... ကိုယ်ကြောက်နေရင် သူငယ်ချင်းကပိုကြောက်လိမ့်မယ်... သေချာပါတယ်... နောက်မှသူပြောတော့ သူအဲဒိမှာ အတော်ကြောက်နေပါတယ်...
ခဏတာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ခရီးသွား လင်မယား... မမေ့နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးပေါ့...
ဒါပေမဲ့ ဟိုလူပြောသလို တောလမ်းက ဒီလောက်လဲ မကြမ်းပါဘူး... ကျိုက်ထီးရိုးတက်ဖူးတဲ့ကျွန်မအတွက်ကတော့ သနားတောင် သနားသေးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်... တကယ့်ကို ရိုးရိုးတောလမ်းလေးပါ... မိနစ် ၃၀မပြောနဲ့ ကျွန်မစိတ်ထင် ၁၅မိနစ် လောက်လျှောက်ပြီးတော့ အောင်မြင်စွာပဲ Wisdom Path ကိုရောက်သွားပါတယ်... အဲဒိရောက်တော့ တခြားခရီးသွားတွေလဲတွေ့ပါတယ်... တောရိပ်တောင်ခိုးတွေနဲ့ လေကောင်းလေသန့်ကလဲ စိတ်ကို ကြည်နူးသွားစေပါတယ်... အဲဒိကနေဆက်ပြီး ၄နာရီစာ တောင်တက်ချင်ရင်ရပါသေးတယ်... တခြားခရီးသွားတွေ ဆက်တက်တာတွေ့ပါတယ်... ကိုယ်က အချိန်မရှိတာရော၊ လူစုနည်းတာရောကြောင့် မလုပ်တော့ပါဘူး... Wisdom Path မှာပဲ အေးဆေးထိုင် လေကောင်းလေသန့်ရှူ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ပါတယ်... စကာင်္ပူမှာ တောတောင်မရှိတော့ တောတောင်ရေမြေသဘာဝကို အလွန်ပဲ နှစ်သက်တဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ ရောက်အောင်လာခဲ့တာ တန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်... တိုခဲ့သမျှ စိတ်တွေအရိပ်တောင်မမြင်ရပဲ စိတ်လဲ ကြည်ရွှင်သွားပါတယ်... သူငယ်ချင်းကတောင် တောလမ်းဆက်လျှောက်ချင်လိုက်တာလို့ပြောပါသေးတယ်...
ဒီရှုခင်းကတော့ စိတ်ရှုပ်ခဲ့သမျှတွေကို မေ့သွားစေတယ်...
နှစ်ပေါင်းရာချီကြာနေတဲ့ ဆုတောင်းတိုင်ကြီးတွေပါ... Infinity သင်္ကေတပုံစံမျိုး ထောင်ထားတာပါ...
Wisdom Path အလယ်မှာ...
ဟိုးထိပ်ထိ ကုတ်တက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လာတယ်...
ဒီလေ... ဒီတော... ဒီတောင်က ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါတယ်...
အပြန်မှာတော့ တရုတ်မိသားစု သမီး ၃ယောက်နဲ့ အဖေ အမေတို့နဲ့ သူကျော်တက်လိုက် ကိုယ်ကျော်တက်လိုက်နဲ့ အေးအေးလူလူပဲ Tian Tan Buddha တောင် ခြေတော်ရင်းကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်... အဲဒိအချိန်မှာ ညနေ ၅ခွဲ ၆လောက်ရှိနေပါပြီ... တခြားသွားစရာ အနီးနားက ရွာတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ အချိန်မရတော့လို့ တောင်အောက်ဆင်းတဲ့ကားနဲ့ ပြန်ဆင်းလာလိုက်ပါတယ်... ၁နာရီနီးပါးပြန်စီရပါတယ်...
အလာတုန်းက ၀င်ချင်တဲ့ Brand Factory outlet တွေရှိတဲ့ Shopping mall ကို ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်... သူငယ်ချင်းပြောပုံအရ စကာင်္ပူထက်စာရင် ဈေးသက်သာပေမဲ့ အရမ်းမသက်သာတာရော... ဒါတွေဝယ်ပြီး နောက်ရက်တွေ ပိုက်ဆံမလောက်မှာစိုးရတာရော (credit card တော့ မသုံးလိုပါ) အကြီးမားဆုံးအချက် မသယ်နိုင်တာရော၊ ဒီလောက်ထိ လိုချင်လောက်တဲ့ ပစ္စည်းမတွေ့တာရောကြောင့် မ၀ယ်ဖြစ်ပါဘူး... အပေါ်ထပ်မှာ Food republic ရှိတာနဲ့ အတော်ပဲဆိုပြီး စကာင်္ပူမှာစားနေကျ Pepper lunch hotplate beef ကိုပဲ စားလိုက်ပါတော့တယ်... "ဒီထမင်း ကောင်းလို့လဲစားတာပါ... ဆိုင်ရှင်လေး ချောလို့လဲသွားတာပါ".... ဟဲ ဟဲ...
Going back to Hotel....
အပြန်မှာတော့ Hong Kong MTR ဘူတာမှာ အင်တာနက် အလကားသုံးလို့ရတာနဲ့ အီးမေးလ်ပို့ ကမ္ဘာ့ အသုံးအများဆုံး ဆိုဒ်ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်... ခုလို Free internet service ပေးထားတာ ခရီးသွားတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်... စကာင်္ပူမှာတောင် အဲဒါမျိုး Service မရှိပါဘူး...
တော်တော်များများက Facebook ၀င်ကြည့်တာများပါတယ်...
ဟော်တယ်ကို ပြန်ရောက်ချိန်တော့ ၂ယောက်သား မိန်းကလေးသဘာဝ စကားတွေပြော၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောရင်း ကိုယ့်ရဲ့ ဆပ်ဆပ်တုန်အောင် နာနေတဲ့ ခြေထောက်လေးတွေ ဆေးလိမ်းရင်း ကိုယ့်ဘာသာ နှိပ်နယ်ကာ အိပ်ပျော်သွားကြပြန်ပါတော့တယ်...
Posted by mabaydar at 10:28 AM 10 comments :
Hong Kong trip Day3- Visit to Ocean Park and Vic...
Hong Kong Trip - Day2report (Trip to Tian Tan Bu...